यी ६ राशिका ब्यक्तिहरु हुन्छन् निक्कै खर्चालु स्वभावका ! « Salleri Khabar
यी ६ राशिका ब्यक्तिहरु हुन्छन् निक्कै खर्चालु स्वभावका !
कोही व्यक्ति शान्त र धैर्य स्वभावका हुन्छन् भने त्यस्तै प्रकारले कोही हरेक कुरामा आफ्नो रिस देखाउनमा माहिर हुन्छन् । यस्तै प्रकारले ज्यादा व्यक्ति पैसा सम्हाल्न त कोही हाई लाइफ स्टाइल जिउन मनपराउँछन् ।यी ६ राशिका महिलाहरु निक्कै खर्चालु स्वभावकी हुन्छन् !
यो राशि भएका महिलाहरुलाई महंगो चिज,कपडा,जुत्ता आदिहरु किन्नमा एकदमै रुचि राख्दछन् । यसमा यि राशि भएका महिलाहरु हाइ लाइफ स्टाइल जिउन मन पराउँछन् ।
यिनिहरुको जिन्दगीमा रुपैयाँ ,पैसा को कुनै भ्यालु हुदैन । यसमा पनि जहाँ पैसा खर्च गर्नेको कुरा आउछ त्यस्तो कुरामा यिनिहरु आफ्नो लागि नभई अरुको लागि खर्च गर्न पनि सँधै तयार रहन्छन् ।
धनु राशि भएका महिलाहरु स्वतन्त्र -सोच विचारका हुनुका साथै आफ्नो मर्जि अनुसार जिन्दगी जिउन मन पराउँछन् । यि महिलाहरु जिन्दगीमा एउटा राम्रो स्थानमा पुग्दछन् । यसमा पनि आर्थिक स्थिति बलियो हुनुका कारण पैसालाई अनावश्यक रुपमा खर्च गर्न पछि पर्दैनन् ।
ज्‍योतिषशास्त्रको अनुसार, यी राशि भएका महिलाहरु एकदमै धैर्य र मेहेनेती स्वभावका हुन्छन् । त्यसकारण यिनिहरुले खुब पैसा कमाउछन् । यदि पैसाको कुरा गर्ने हो भने यिनिहरुलाई कुनै राम्रो चिज किन्नु परेमा जति महंगोको सामाान भए पनि पैसा झिक्न डराउदैनन्।
यो राशि भएका महिलाहरुलाई हरेक चिजमा एकदम परफेक्ट चाहिन्छ ,यसमा चाहे त्यस चिजलाई किन्नका लागी जतिसुकै खर्च किन गर्न नपरोस् त्यस्ता चिज किनेर नै छोड्छन् ।